बिमलेन्द्र निधिले गगनसहित युवा नेतासँग भोट माग्दा शेखर कोइरालाको नाम आएपछि ... - Media Dabali
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरू भएसँगै उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले भेटवार्ता र छलफललाई तीब्रता दिएका छन् ।
हिजो सोमवार बिहान आफ्नो वैवाहिक वर्षगाँठको अवसर पारेर पार्टीका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई मध्यबानेश्वरस्थित निवासमा बोलाएर लन्च मिटिङ गरेका निधिले सोमबार साँझ कांग्रेसका ९ युवा नेतालाई भेटेका छन् ।
काठमाडौंको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भएको साँझको छलफलमा कांग्रेसका युवा नेताहरू डा. चन्द्र भण्डारी, गगनकुमार थापा, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, दिपक गिरी, सरिता प्रसाइँ, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल र जीवन परियार सहभागी रहेका थिए ।
छलफलमा निधिले युवा नेतामाझ आफू आगामी महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वका लागि अघि बढेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरे । छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘उपसभापतिज्यूले म सभापतिका लागि अघि बढे । तपाईंहरूको सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भन्नुभयो । हामीले पार्टीलाई नयाँ पुस्ता चाहिएको छ, शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइले बिदा लिनुपर्छ भन्यौं ।’
युवा नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिदा लिँदै पार्टी संरक्षकका रूपमा बस्नुपर्ने बताएपछि उपसभापति निधि हौसिएका थिए । तर युवा नेताहरूले सभापतिमा डा. शेखर कोइराला समेत देखिएकाले सल्लाह गर्न सुझाव दिएका थिए । छलफलका क्रममा अधिकांश युवा नेताहरूको झुकाव सभापतिमा शेखर कोइरालातिर देखिएको थियो । यसअघि निधिले असार २ गते पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र शनिवार नेता बलबहादुर केसीलाई पनि भेटेर सहयोग मागेका छन् ।
सभापति देउवासँग भेटेका निधिको छलफल सौहार्द हुन सकेन । सभापति देउवा पक्षकै उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले समेत सभापतिमा उम्मेदवारी दिने इच्छा देखाएका बेला दुबै नेताबीच देउवानिवास बुढानिलकण्ठमा गत शनिबार छलफल भएको थियो । तर छलफलमा दुबै नेताबीच कडा टक्कर हुने देखिएको थियो ।